Vanhu Vakamboedza Kuchinja Zviri muBhaibheri Asi Vakakundikana
VaMasorete vakanyatsokopa Magwaro nemazvo
ZVAVAKAEDZA KUITA: Bhaibheri rakanyatsochengetedzwa kusvikira nhasi uye vanhu vaisarifarira havana kukwanisa kuriparadza. Asi kune vamwe vakopi nevashanduri vakaedza kuchinja mashoko ari muBhaibheri. Vakatomboedza kuchinja Bhaibheri kuti rienderane nedzidziso dzavo panzvimbo pekuti ivo vaite zvinoenderana nezviri muBhaibheri. Chimboona mienzaniso inotevera:
Nzvimbo yekunamatira: Mumakore ari pakati pa300 B.C.E. na100 B.C.E. vanyori vemabhuku mashanu ekutanga emuBhaibheri aishandiswa nevaSamariya vakawedzera mashoko pana Eksodho 20:17 ekuti “muAargaareezem. Uye ndomauchavaka atari.” VaSamariya vaida kuti Magwaro atsigire kuvaka kwavakaita temberi “muAargaareezem,” kana kuti muGomo reGerizimu.
Dzidziso yekuti Mwari, Jesu neMweya Mutsvene chinhu chimwe chete: Pasina kana makore 300 kubva pakapera kunyorwa Bhaibheri, mumwe munyori anotsigira dzidziso iyi akawedzera mashoko pana 1 Johani 5:7 ekuti, “kudenga, Baba, Shoko, noMweya Mutsvene: zvitatu izvi chinhu chimwe chete.” Mashoko iwayo akanga asimo muzvinyorwa zvekutanga zveBhaibheri. Mumwe muongorori weBhaibheri anonzi Bruce Metzger anoti, “Kubva kumakore ekuma500,” mashoko iwayo ange achiwanikwa “kakawanda muzvinyorwa zveOld Latin ne[Latin] Vulgate.”
Zita raMwari: Vashanduri vakawanda veBhaibheri vakasarudza kubvisa zita raMwari muMagwaro vachitevedzera zvaiitwa nevaJudha zvekutenda mashura. Vakaritsiva nemazita akadai seokuti “Mwari” kana kuti “Ishe.” MuBhaibheri mazita aya haangoshandiswi achireva Musiki chete asiwo anogona kureva vanhu, zvinhu zvinoshandiswa pakunamata kwenhema, kana kuti kunyange Dhiyabhorosi chaiye.—Johani 10:34, 35; 1 VaKorinde 8:5, 6; 2 VaKorinde 4:4. *
ZVAKAITA KUTI VASABUDIRIRA: Chekutanga, kunyange zvazvo vamwe vakopi veBhaibheri vaisaita basa ravo nemwoyo wose uye vamwe vachitoita zveunyengeri, kune vakawanda vaiva neunyanzvi uye vachiriita nemazvo. VaMasorete vakakopa Magwaro echiHebheru kubva kumakore ekuma500 kusvika kuma900 uye zvinyorwa zvavo zvinonzi Masoretic text. Zvinonzi vaiverenga kuti mashoko ainge ari muzvinyorwa zvekutanga mangani kuti vave nechokwadi chekuti vaisazoita zvikanganiso. Pavaiona sekuti chinyorwa chavari kukopa chine chikanganiso, vaibva vanyora mashoko mashoma anoratidza izvozvo kumucheto kwezvinyorwa zvavo zveMasoretic text. VaMasorete havana kuda kumbochinja mashoko emuBhaibheri. Purofesa Moshe Goshen-Gottstein akanyora nezvavo achiti, “Vaiiona iri mhosva hombe kuti munhu achinje mashoko ari muBhaibheri achitoziva zvake.”
Chechipiri, iye zvino kune zvinyorwa zvakawanda zveBhaibheri uye zvinotobatsira vaongorori veBhaibheri kuti vaone zvikanganiso zvakaitwa. Somuenzaniso, vatungamiriri vezvitendero vakaita makore akawanda vachidzidzisa kuti maBhaibheri avo echiLatin ndiwo ane nemashoko echokwadi. Asi, pana 1 Johani 5:7, vakawedzera mashoko ambotaurwa panotangira nyaya ino. Chikanganiso ichi chakatopindawo muBhaibheri reChirungu rinonyanya kushandiswa nevakawanda reKing James Version! Asi zvimwe zvinyorwa zvakazowanika zvaiti kudii pandima iyi? Bruce Metzger akanyora kuti: ‘Mashoko akawedzerwa pana 1 Johani 5:7 haawaniki muzvinyorwa zvose zvekare zveBhaibheri zvechiSyriac, Coptic, Armenian, Ethiopic, Arabic, Slavonic, kunze kwezvinyorwa zvechiLatin chete.’ Izvi zvakaita kuti Bhaibheri reKing James Version nemamwe akazodzokororwa abvise mashoko akawedzeredzwa pandima iyi.
Chester Beatty P46, chinyorwa cheBhaibheri chekuma200 C.E.
Zvinyorwa zvekare-kare zvakazowanika zvinoratidza here kuti mashoko eBhaibheri akachengetedzwa zvakanaka? Pakawanikwa maDead Sea Scrolls muna 1947, vaongorori veBhaibheri vakanga vava kukwanisa kuenzanisa zvinyorwa zveHebrew Masoretic nezvinyorwa izvi zveBhaibheri zvainge zvawanikwa izvo zvakanga zvatova nemakore anopfuura 1 000 kubva pazvakanyorwa. Mumwe wevaongorori vemaDead Sea Scrolls akataura kuti pane chinyorwa chimwe chete “chinoratidza pasina mubvunzo kuti vakopi vechiJudha vainge vanyatsoita basa ravo nemazvo vachikopa mashoko eBhaibheri sezvaari mumakore anopfuura 1 000.”
Raibhurari inonzi Chester Beatty iri muDublin, kuIreland, ine zvinyorwa zvenhokwe zvemabhuku anenge ose zvawo eMagwaro echiKristu echiGiriki, kusanganisira zvinyorwa zveBhaibheri zvakanyorwa papfuura makore anenge 100 chete kubva pakapera kunyorwa Bhaibheri. The Anchor Bible Dictionary rinoti, “Kunyange zvazvo zvinyorwa zvenhokwe zvichitiratidza zvimwe zvinhu zvitsva nezvemashoko eBhaibheri, zvinyorwa izvi zvinoitawo kuti tivimbe nekukopwa kwaiitwa mashoko eBhaibheri.”
“Hakuna rimwe bhuku rekare rakanyatsokopwa nemazvo kunze kweBhaibheri”
KUBATSIRA KWAZVAKAITA: Pane kuti kuwanikwa kwezvinyorwa zvekare zvakawanda zveBhaibheri kurikanganise, kwakatoita kuti rivandudzike. Sir Frederic Kenyon vachitaura pamusoro peMagwaro echiKristu echiGiriki vakati, “Hakuna rimwe bhuku rekare rinovimbwa naro seBhaibheri, uye hakuna muongorori akamira pachokwadi angaramba kuti mashoko arimo akanyatsosvika kwatiri sezvaari.” William Henry Green achitaurawo nezveMagwaro echiHebheru akati: “Hakuna rimwe bhuku rekare rakanyatsokopwa nemazvo kunze kweBhaibheri.”
^ ndima 6 Kuti uwane mamwe mashoko ona Kabhuku Kanobatsira Pakudzidza Shoko raMwari, peji 1-13, kari pawww.jw.org.